Nantenaina: Un aveugle qui réussit
mercredi, 11 octobre 2017 08:34
Nantenaina na ny tena anarany RAJAONARISON Abel Nantenaina,
Raim-pianakaviana manana fahasembanana ara-pahitana nahazo Master en gestion de Risque et des Catastrophes.
Manambady ary niteraka roa mirahavavy i Nantenaina, eny Amboditsiry izy ireo no monina.
Fito mianadahy izy ireo no nateraky ny Ray amandreniny, nanomboka teo amin’ny faha valon’ny taonany teo izy no tsy dia nahita tsara intsony ary nitarika ny tsy fahitana tanteraka izany.
Tany amin’ny taona 1997 tany no nisy fotoana nitsaboana ny masony izay nampijanona ny fianarany. Tao aorinan’io nefa dia nitohy izany fianarany izany ary ny taona 2002 izy no nahazo ny BEPC teo amin’ny faha 19 taonany, ny 2003 kosa izy dia efa nahazo ny Bakalorea, ary nanao fifaninana hidirana eny Ankatso amin’ny taranja ekonomia.
Tamin’ny 2007 izy no nahazo Maitrise izay isaorana eto ny avy ao amin’ny firaisam-be afrikanina nanohina sy nanampy azy tamin’ny fianarany, ary anisan’ny mbola faniriany ny ho tonga hatramin’ny Doctorat.
Mahavaky boky eo amin’ny 221 pejy ao anatin’ny telo andro kosa izy.
Ankoatran’ny asa aman-draharahany ihany koa dia manan-talenta ihany koa i Nantenaina, toy ny mitendry gitara sy mitsoka sodina ary tena mahafehy tanteraka.
Ny faniriany dia ny mbola hianatra, manana fitaovana manokana moa i Nantenaina ho entina manatanteraka izany fianarana izany toy ny fampiasana ny plaque Braille sy ny logiciel JAWS na ny Job Acces With Speak.
Izy ihany koa dia efa ho enin-taona no ECD ao amin’ny ministeran’ny mponina kanefa dia diplaoma BEPC no andraisana karama amin’izao fotoana, ka dia manaitra ny tompon’andraikitra ity farany ny mba hijery azy akaiky.
Ny hafatra nataon’i Nantenaina dia : « Tompon’andraikitra amin’izay zava-misy ny olona manana fahasembanana » ary tokony misy ny andraikitry ny fanjakana amin’ny fijerena ireny olona manana fahasembanana ireny.